Laba Wiil Oo Ka Mida Magacyadii La Sheegay Inay Ka Mid Yihiin Kooxdii Weerartay Suuqa Westgate Nairobi Oo La Hadlay Saxaafadda | Salaan Media
Laba Wiil Oo Ka Mida Magacyadii La Sheegay Inay Ka Mid Yihiin Kooxdii Weerartay Suuqa Westgate Nairobi Oo La Hadlay Saxaafadda
Sep 25, 2013 Sweden(SM) – Bogga Twittwerka ayaa lagu faafiyey magacyada kooxda weerarka ku qaadey suuqa Westgate ee magaalada Nairobi maalintii Sabtida ee 21.09.2013, waxaana ka mid ahaa mahacyada ay faafiyeen Saddex dhalinyaro ah oo ku nool dalka Sweden. Koontada laga faafiyey magacyada ayaa la sheegay in ay ka mid tahay kuwa ay iska leeyihiin kooxda al-Shabaab. Magacyada la faafiyey waxaa qaatey inta badan ssaxaadda caalamka.
Jariidadda Expressen ee ka soo baxda dalka Sweden ayaa la kulantey labo ka kid ah dhalinyaradaas kuwaas oo degan magaalada Växjö.
Xarakada al-Shabaab oo aan horey looga baran in ay shaaciyaan malayshiyaadkooda fuliya hawlgalada caynkan oo kale ah ayaa Koonto-Twitter sheegatey in ay ku hadleyso magaca al-Shabaab, ku shaaciyey qiyaastii 20 magac oo ah kuwa fuliyey weerarka lagu qabsadey Suuqa caanka ku ah Dalxiisayaasha iyo dadka dhaqaalaha haysta ee Kenya “Westgate”
Magacyada la shaaciyey ayaa lagu daray dalalka ay ka yimaadeen ama deganaan jireen, waxaana ay da’doodu isugu jirtey 20 – 27 jir ka kala yimid Maraykanka, Ingriiska, Kanada, Finland, Siiriya, Ruushka iyo dalka Sweden, Dalalka la sheegay in ay u haystaan dhalashadooda ayaa sheegay in aysan cadeyn karin sheegashadaas.
Jariidadda Expressen oo la kulantey Ismaaciil oo ah 19 jir iyo Mohammed oo ah 21 jir kuwaas oo ku sugan guriga ay ka degan yihiin magaalada Växjö ee koonfurta Sweden, asal ahaana ka soo jeeda dalka Soomaaliya, haystana deganaansho Sweden ah, ayaa sheegay in ay la yaab ku noqotey markii ay magacyadooda ka arkeen liiska kooxda al-Shabaab shaacisey.
Wiilasha Sweden ku sugan ee la eedeeyey ayaa sheegay in aysan weligoodba xiriir la sameyn ururada caynkaas oo kale ah.
-Waxaan ogaadey maalintii shalay markii aan ka imid Iskoolka, Hooyadey waxay ahayd mid aad u wel-welsan, waxaa telefoon u soo dirayey dadkii aan macridafada ahayn, waxaana ay weydiinayeen in aan Kenya jiro, ayuu yiri Ismaaciil.
– Ma ogi warna uma hayo waxa ka danbeeyey in ay magacyga halkaas geliyaan ayuu yiri Ismaaciil
Magnus Ranstorp oo ah cilmi baare arrimaha argagixisada ayaa u sheegay Jariidadda Expressen in tani ay tahay mid marinhabaabin ah, aysana macquul ahayn dad ku sugan Sweden in ay ay weerar ka geysteen nairobi haddana ku sugan tyihiin halkii ay deganaayeen.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la aaminsan yahay in ay ka danbeeyeen arrintan dad ciil iyo carro u qaba dhalinyarada ay magacyadooda soo daabaceen, ama ay ka ahayd ciyaar iyo marinhabaabin meel xun la gashey